Ny kavina an-tsofin'ny Comrex IFB Afaka mampihena ny vidin'ny famokarana | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ny Comrex's EarShot IFB dia afaka mampihena ny vidin'ny famokarana
Ny Comrex's EarShot IFB dia afaka mampihena ny vidin'ny famokarana
Izay famokarana matihanina matihanina miezaka manangana dia azo antoka fa mandany fotoana betsaka amin'ny famoronana ilaina ho an'ny votoaty noforonina sy ho fandaminana. Saingy ny vidin'ny famokarana irery dia mitombina amin'ny karazana orinasa akora toy ny Comrex miasa mba hanamaivanana, sy ireo EarBhot IFB dia iray amin'ireo fitaovana maro ao anatin'ny lisitry ny fikaonandohany hanampiana azy ireo ho an'ireo zava-manasoa maro mandrobaka ao amin'ny tontolo iainana nomerika ankehitriny.
Hatramin'ny nananganana voalohany ny orinasa tamin'ny 1961, Comrex Izy io dia nanam-pahaizana tamin'ny fampandrosoana ara-teknika tamin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia vaovao sy haitao ho an'ny radio sy fahitalavitra talohan'ny nampidirany azy io amin'ny main-dahatsoratra. Comrex volavola sy fanamboarana fitaovana izay mampiasa ny teknolojia efa mandroso indrindra mba hampifandraisana ireo mpanao gazety amin'ny mpihaino azy. Ny orinasa dia miasa amin'ny fananganana fitaovana azo itokisana sy be mpampiasa izay atokisan'ny injeniera mba hiasa, na dia mandritra ny fampielezan-kevitra sarotra indrindra.
Nandritra ny enimpolo taona mahery izay, Comrex namokatra fitaovana avo lenta avo lenta ampiasain'ny matihanina radio sy fahitalavitra manerantany. Marobe Comrex ny vokatra dia misy ACCESS sy BRIC-Link IP rakipeo avoakan'ny indostria. Ireo fitaovana ireo dia manolotra fampiasa amin'ny orinasam-pitaterana isan-karazany, ary ao anatin'izany ny fanatanjahan-tena amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena, ny feo ary ny rohy amin'ny studio-transmitter, sy ny maro hafa.
Ny codec video LiveShot IP no hany tolotra finday (na IP) mifamatotra ao amin'ny indostria, ary manome horonantsary roa lalana ho an'ny mpampiasa, miaraka amin'ny IFB roa. Izany dia mahatonga azy io ho vahaolana mivantana amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao tsy misy tariby. Amin'ny alàlan'ny famatahana fantsona data marobe, ary ny maotera Adaptive Management EngineAll mandroso indrindra amin'ny indostria, Comrex ny ny codecs, ao anatin'izany ny CrossLock VPN Technology, dia manampy amin'ny fanomezana fahatokisana tsy hitovizany ho an'ny fampitana ny feo avo lenta sy / na video amin'ny Internet. Manolotra vahaolana amin'ny dinidinika ihany koa ny orinasa ao anatin'izany ny hibrida an-tariby ho an'ny POTS sy VoIP ary koa vavahadin-tserasera IP na antsoina hoe Opal ho an'ireo vahiny manam-pahaizana.
The ACCESS ary BRIC-Link Ny codecs IP audio dia mampiasa teknolojia fanamafisam-peo matanjaka mba hiantohana ny fandaharana azo itokisana amin'ny tamba-jotra IP sarotra kokoa. Misaotra noho ny traikefa an-taonany maro amin'ny IP, Comrex dia afaka namolavola ny CrossLock fitaovana afaka mamahana ny fangatahana tsy manam-paharoa amin'ny fandefasana horonan-tsary, miaraka amin'ny fampandrosoana an-dry zareo LiveShot Teknolojia horonantsary IP. Ary ireo ezaka ireo dia nanatsara ny teknolojia hibridin'ny telefaona tamin'ny vokatra toy VH2, sy ny tany vaovao azo alain-tahaka kokoa azo alaina amin'ireo vokatra toa ny EarBhot IFB, izay mampihena ny vidin'ny teti-bola ho an'ny famokarana fampielezam-peo.
Comrex ny EarBhot IFB dia rafitra mifototra amin'ny hardware dia manome famahanana horonantsary mivantana ho an'ireo antso. The EarBhot IFB manome fandaharana amin'ny serasera mivantana an-tariby sy onjam-peo IFB mankany amin'ny fampitana lavitra any an-tsaha, toy ny tatitra TV ENG. Callers 30 eo ho eo no afaka miditra ao ary hihaino ny fihainoana feo, izay ahafahana misolo tsipika 30 POTS miaraka amina boaty kely iray.
Satria ny ankamaroan'ny toeram-piasana dia mbola mampiasa andalana POTS (Plain Old Telephone System) mba hanomezana ny sakafony IFB, ny filàna amin'ny mpampita fahitalavitra hampihena ny vidiny sy ny fijanonana ao anaty teti-bola dia lasa ilaina kokoa, indrindra raha ny fampiasana ny andalana POTS dia miteraka fandoroana vola bebe kokoa noho izany manao. Comrex nanorina ny EarBhot IFB hitondra ny herin'ny VoIP (Voice-over-IP) amin'ny teknolojia IFB.
Endri-javatra maro an'ny EarBhot IFB ahitana:
Fandraisana an-peo efatra (izay azo atokana ho an'ny IFB)
Mahavita hatramin'ny 30 voantso
Fandraisana an-tsoratra azo atao
Teknolojia VoIP mitahiry vola
Mampiasa G.711, ary azo atao fehezina amin'ny alàlan'ny feo avo lenta kokoa
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny EarBhot IFB, Dia tsidiho ny www.comrex.com / vokatra / earshot-ifb /.
Nahoana Comrex Tsara ho an'ny indostrian'ny fahitalavitra
Raha ny indostrian'ny fampielezam-peo sy ny famoronana no mitarika azy dia tsy misy na inona na inona milaza fa tsy mampiseho ny fahaizany nametahana azy tamin'ny matihanina manana talenta sy marika marika miavaka. Orinasa toa Comrex izay namokatra fitaovam-pitaterana avo lenta avo indrindra, ary miaraka amina bonus fanampiny amin'ny haingam-pandeha mora kokoa, ny mpamoaka gazety dia manana efitrano fandraisam-bahiny betsaka kokoa mba hiasa amin'ny vokatra vokariny amin'ny alàlan'ny famerana ny teti-bolam-pananana mitazona ny tanjaky ny fahaizana manampy ny atiny sy ny marika manohana azy.
Raha mila fanazavana fanampiny momba Comrex, mitsidika, www.comrex.com /.
Access BRIC-Link IP codec fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa matihanina sivy CES2017 Cobalt Encoder Comrex ekolojia nomerika EarBhot IFB Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Litra LiveChot IP codec Matthews vilaniny fandraofan-davenona Telo sy zana-tsipìka TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera 2020-05-11
Previous: Xilica dia namoaka ny fandaharam-pampianarana manerantany 'Genius'
Next: Famokarana Focal Point dia mampiasa atem Mini ho an'ny resadresaka mivantana amin'ny stream-n'i GBMC HealthCare